onlineakhabar.com: लौ हेर्नुहोस् !! नेपालमा बन्यो प्लास्टिक बाट पेट्रोल र डिजेल (भिडियो)
Main News, News » लौ हेर्नुहोस् !! नेपालमा बन्यो प्लास्टिक बाट पेट्रोल र डिजेल (भिडियो)
लौ हेर्नुहोस् !! नेपालमा बन्यो प्लास्टिक बाट पेट्रोल र डिजेल (भिडियो)
हामीले दिनुहँ प्रयोग गर्ने प्लाष्टिकजन्य पदार्थले वातावरण प्रदुषण गरेको भन्दै सरकारले यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । तर, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का वैज्ञानिकहरुले फोहोरमा फालिएका प्लास्टिकबाट तेल निकालेर देखाउँदै सरकारलाई नयाँ बाटो देखाएका छन् ।
नास्टको ल्याबमा बिहीबार फोहोरको थुप्रोबाट टिपेर ल्याइएका प्लास्टिकबाट पेट्रोलियम तेल उत्पादन भएको अचम्मको दृश्य देखियो । नाकाबन्दीका कारण देशले तेलको चरम अभाव खेपिरहेको समयमा फोहोरमा फ्याकिएका प्लाष्किटबाटै तेल निकाल्ने प्रविधिलाई सबैले र महत्वपूर्ण माने ।
अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल) का बीएससी चौंथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले ल्याबमा प्लास्टिकबाट तेल उत्पादन गरेर देखाइदिएका हुन् । उनीहरुले ल्याबमा पानीका जारका बिर्को, पोलिथिन झोला, विद्युतीय सामग्री प्याक हुने फर्म लगायत वस्तु जम्मा गरेर त्यसबाट तेल निकालेका हुन् ।